सस्तोका लागी बजार चाहार्ने स्वभावले नक्कली सामानले बजार पाएका छन | Yatra Khabar
Home अन्तर्वार्ता सस्तोका लागी बजार चाहार्ने स्वभावले नक्कली सामानले बजार पाएका छन
जिवन अधिकारी, उपाध्यक्ष नेपाल अटोमेकानिक्स टे«ड युनियन
जिवन अधिकारी अटो मेकानिक्स क्षेत्रको चिरपरिचित नाम हो बुटवलका युवा व्यवसायीका रुपमा चिनिने जिवन अधिकारीको सामाजिक क्षेत्रमा समेत अलग पहिचान छ । बिभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुमा नेतृत्व सम्हाली सकेका अधिकारी नेपाल अटो मेकानिक्स टे«ड युनियनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष हुन । प्रस्तुत छ जिवन अधिकारी संग अटो मेकानिक्सका समस्या र संगठनको भुमिका लगायतका बिषयमा गरीएको कुराकानी ।
नेपाल अटो मेकानिक्स ट्रेड युनियन कहिले स्थापना भएको कस्तो संस्था हो ?
नेपाल अटो मेकानिक्स ट्रेड युनियन २०५४ साल श्रावण ४ गते स्थापना भएको हो । यो युनियन अटो मेकानिकल क्षेत्र संग सम्वन्धित प्रतिष्ठान तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत अटोमेकानिक्स मजदुर तथा कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्दै उनिहरुको पेशागत हकहित र अधिकारको रक्षा गर्ने तथा उनिहरुलाई सामाजिक दायित्व समेत बोध गराउने एवं जिम्मेवार नागरिकको रुमा भुमिका निर्वाह गर्दै सामाजिक परिवर्तन र समतामुलक समाजको निर्माणको आन्दोलनमा सहभागी गराई समृद्ध राष्ट्रको निर्माणमा सहभागी गराउने उदेश्यले स्थापना भएको हो । यसमा देश भरीका हज्जार अटोमेकानिक्स मजदुरहरु आवद्ध हुनु हुन्छ ।
अधिकांस संघ संगठनहरु राजनिती गर्ने र माथी चढने माध्यम अर्थात भ¥्यांङको रुपमा प्रयोग भएका छन । कतै यो पनि ?
यो युनियनले कुनै राजनितीक गतिबिधी गर्दैन । कुनै पनि राजनितीक दलको भातृ संगठनको रुपमा समेत यसले काम गर्दैन । यो एउटा अटो मेकानिकल क्षेत्रमा काम गर्ने स्वरोजगार मजदुरहरुको साझा चौतारी हो । तर श्रमिक र मजदुरका पक्षमा वकालत गर्ने राजनितीक दल संग यसको सामिप्यता रहन्छ, नैतिक समर्थन गर्दछ ।
यो संस्थाले सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान के हो ?
यस युनियनको प्रस्तावनामा नै युनियनको सामाजिक उत्तरदायित्व मा आफ्नो भुमिका रहन्छ भन्ने उल्लेख गरीएको छ । यो उल्लेख गर्नु नै हामी अटो मेकानिक्सहरु समाजका सकारात्मक कार्यहरुका सहयोगी रहने छौं भन्ने हो भने गलत र असमाजिक गतिबिधीको बिरोध गर्दछौं भन्ने पनि हो । हामीले आफ्नो स्थापनका कालदेखिनै बिभिन्न सामाजिक र रचनात्मक कार्यहरु गर्दै आईरहेका छौं । गत बैसाख १२ गते गएको बिनासकारी भुकम्पका समयमा उद्दार कार्यमा खटिने देखि राहत सामग्री जुटाउने तथा सदस्यहरुका बिचमा आर्थिक संकलन गरेर बितरण गर्ने समेत गरेर आफ्नो भुमिकालाई प्रभावकारी ढंगले पेश गर्यौं ।
अटो मेकानिक्सहरु सडक सुरक्षाका महत्वपुर्ण माध्यम हुन भनिन्छ नि तर त्यस तर्फ युनियन संबेदनशिल देखिएन किन ?
अटो मेकानिक्सहरु सडक दुर्घटना न्युनिकरणको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण भुमिका राख्छन । किनकी सवै खाले सवारी साधन मर्मत सम्भार गर्दा अत्यन्त लगनशिलता र इमान्दार भएर कार्य गर्छन । बढदो सवारी चाप भएको अवस्थामा दुर्घटना न्युनिकरणका लागी हामी ट्राफिक प्रहरी,सवारी चालक र यात्रुहरु संग समेत समन्वय गरी बिभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दे आएका छौं ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाको महत्वपुर्ण कारणहरु मध्ये नक्कली अर्थात कमसल पाटपुर्जा प्रयोग हुनु हो भनिन्छ यसलाई मेकानिक्सहरु बाट रोक्न सकिदैन ?
हाम्रो एउटा पनि सकारात्मक भुमिकाले चालक वा यात्रुको ज्यान जोगिन्छ भन्ने बुझेका छौ । हामी कतिपय सवारी साधनका पाट पुर्जाहरु नक्कली पर्न सक्ने र त्यस्ता पाटपुर्जा प्रयोग गर्न हुदैन भन्ने समेत सवारी धनीहरुलाई बुझाउने गर्छौ यसको उदेश्य प्राबिधीक कारणले कसैको ज्यान जान नपाओस भन्ने नै हो । तर हाम्रो देशको समग्र आर्थिक अवस्थाका कारण पनि यस्तो समस्या भएको छ । कतिपय सवारीधनीहरु सस्तो पाटपुर्जा खोज्दै बजार चाहार्नु हुन्छ । जसका कारण कमसल र नक्कली पाटपुर्जाले ठाउ पाई रहेका छन ।
नेपालको प्राबिधीक जनशक्ति कामचलाउ मात्र छ भनिन्छ ,यीनिहरुको दक्षता बृद्धीको लागी तपाईहरुका योजना के छन ?
नेपालका अटो मेकानिक्सहरु अधिकासं देखेर कामको अनुभवका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा रोजगारी गर्ने गरेका छन । कुनै पनि त्यस खाले प्रबिधीक शिक्षालय नहुदा यस्तो समस्या श्रृजना भएको हो पछिल्लो समय केही यस्ता शिक्षालयहरु सञ्चालनमा आएका छन तर तिनमा निम्न बर्गको पहुंच पुग्न सकेको छैन । यसमा प्रवेश गर्ने मजदुरहरु निम्न बर्गीय परिवारका छन । उनीहरु त्यो अध्यायन गर्ने अवसरबाट बञ्चित छन । कसैलाई गुरु मानेर गरीएको यसको शिकाईबाट चलेको यो पेशा पछिल्लो समय भएको प्रबिधीको बिकास र आधुनिकीकरणले समस्यामा पर्न सक्ने खतरा छ । बर्षौ देखि पेशा व्यवसाय गरी रहेकाहरु न्या प्रबिधी भित्रिना साथ अन्यौलमा पर्ने र तालीमको खोजिमा निस्कनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीले समय समयमा बजारमा ल्याउने नया मोडल र मापदण्डका सवारी साधनका कारण यो क्षेत्रका मेकानिक्सहरु सधै सिकारु जस्तै हुनु पर्ने बाध्यता छ । यो समस्या समाधान गर्न हामीले समय समयमा सवारी साधनका उत्पादकहरु संग समन्वय र सहकार्य गरी तालिम समेत दिदै आएको छौं ।
अटो मेकानिक्स मजदुरहरुका मुख्य समस्या के के हुन ?
हामीले देख्ने र भोग्ने गरेको समस्या हो हाम्रो समाजले अटो मेकानिक्सलाई हेर्ने दृष्टीकोण । हामी जहिले् पनि समाजको हेर्ने दृष्टीकोण बाट हेपीएका छौं ।कामको प्रकृती अत्यन्तै जटिल र जोखिमपुर्ण पनी छ ।तर हामीले मर्मत वा तयार गरेका सवारी साधनबाट समाजका साना ठुला सवै कैयौ किलोमिटरका दुरी पार गर्छन । उनिहरुको यात्रालाई सहज र आरामदायि भनाउन भरपर्दो बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका हाम्रा मेकानिक्स हरुको रहन्छ तर योद जान्दा जान्दै पनी अटो मेकानिक्सलाइै हेर्ने हाम्रो समाजिक चेत र दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसक्नु दुखदायी छ । होच्याएर बोलाउने अश्लिल शव्द प्रयोग गरेर गाली गर्ने जस्ता व्यवहारलदे अटो मेकानिक्सहरुलाई दुखित बनाएको छ । मानिसले आफ्नो भन्दा स्याहार सवारी साधनको गर्छ तर त्यसको मर्मत सम्मार गर्ने मेकानिक्सलाई सम्मान गर्न सक्दैन ।
यहा हरुको कुनै योजना त्यस्तो छ जसका कारण अटो मेकानिक्सले राहत महशुस गरोस ?
हामीले अटो मेकानिक्सहरुको राहतको लागी एउटा कोष स्थापना गरेका छौ कुनै समस्या आउदा त्यही कोष बाट सहयोग गर्ने गर्दै आएका छौं । यो कोषलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा हामी जुटि रहेका छौं ।